Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Shaqada fog ee ardayga 2022
Bal qiyaas noloshaada ardaynimo iyo hawl maalmeedkaaga:
1- in aad kacdo dhawaqa qaylo dhaantaada
2- in aad muraayad ka fiiriso waji cad oo soo raaxaysan (si fiican u seexo adigoon walwal lahayn)
3- inaad waqti ku bixiso nadaafadda shakhsi ahaaneed (ka qaado waqti badan ama ka yar inta aad rabto)
4- inaad ku raaxaysato quraac macaan oo caafimaad leh (looma baahna inaad guriga ka soo degdegto adigoo calool madhan).
5- U safrida dugsiga sida ugu hufan ee aad ku heli karto (maalin baabuur bilaash ah!)
6- In aad saaxiibadaada la yeelato khibrad waxbarasho oo macno leh oo firfircoon
7- inaad weli haysato wakhti aad la qaadato qoyska iyo asxaabta (hangout ka hor ama ka dib dugsiga)
8- inaad ka taxadarto hawlaha guriga (ka iibso raashinka ama u dir hooyo qoraal ah inaad guriga ku soo noqon doonto ka dib markii la filayo)
9- Ka dhig inta ka hartay maalintaada mid siman oo aan taxadar lahayn ( samee wax kasta oo aadan weligaa waqti u helin)
10- in aad wax u barato imtixaankaas soo socda (madax-xanuun la'aan oo habeenkii dambe ka soo baxa).
11- akhrinta buug wanaagsan dhamaadka maalinta (ma jiraan cadaadis indhaha ah oo ka shaqeynaya shaashada maalinta oo dhan)
12- in aad si fudud u seexato oo aad si qoto dheer u seexato (Nabadgelyo habeennadaas hurdo la'aanta ah ee ka welwelsan dugsiga!)
Bal hadda qiyaas adduun ay waxyaalahani suurtogal yihiin.
Qaar ka mid ah, waxay horeba u noqon kartaa xaqiiqo jirta, laakiin kuwa naga mid ah oo weli la tacaalaya walaaca iyo daalka dheellitirka dugsiga iyo shaqada, waxaan ognahay in isbeddel dhab ah uu weli imanayo.
Warka fiicani waa in tignoolajiyadu ay ka shaqaynayso sidii ay nolosheena u hagaajin lahayd siyaalo aan la qiyaasi karin toban sano ka hor.
Tiknoolajiyada ayaa hadda diyaar ah si ay u xalliso dhibaatooyin badan oo ardaydu la kulmaan, gaar ahaan kuwa naafada ah. Sida hababka jireed ee internetka oo ay noqdaan kuwo aad u adag, waxay ballanqaadaan dabacsanaan weyn iyo la qabsiga habka aan u shaqeyno iyo u noolaano. Awooddooda dib-u-habaynta ama xitaa ka saarida gelinta bini'aadamka waxay u saamaxdaa dadka naafada ah inay ka gudbaan caqabadaha kale ee aan laga gudbi karin.
Caawinta tignoolajiyada, dadka naafada ah waxay awoodaan inay ka gudbaan caqabadaha shakhsi ahaaneed, hoggaamiyaan nolol madaxbannaan oo ay si wanaagsan wax ugu biiriyaan bulshadooda.
Tiknoolajiyadu waxay suurtogal ka dhigi kartaa shaqo fog 2022 ardayda jiilkan iyada oo labadaba fududeynaya iskaashiga ka dhexeeya dadka wada shaqeeya meel kasta oo ay ka joogaan adduunka oo u oggolaanaya ardayda naafada ah inay yeeshaan jadwal dabacsan.
Bal qiyaas inta wakhti ay u kaydin karto ardayda naafada ah haddii ay samayn karaan shaqadooda guriga ka hor ama ka dib shaqada iyaga oo aan u safrin dugsiga.
Nidaamyada baarkinka fog, sida paytowriteeessays.com, xitaa kuwa leh caqabadaha qallafsanaantu waxay qaban karaan hawlo sida cilmi-baarista internetka iyo qorista guriga.
Shaqada fog-fog waxa laga yaabaa inaanay u badnayn sida goobaha shaqada ee maanta, laakiin hubaal waa tallaabo loo qaaday jihada saxda ah. Waxay tixgelinaysaa kuweenna aan iman karin fasallada maalin kasta waxayna u oggolaanaysaa ardaydan inay ka shaqeeyaan qaar ka mid ah hawlo la mid ah kuwa asaagood ah (cilmi-baaris iyo qoraal onlayn ah) iyo/ama raacaan dano kale.
Shaqada fog ma noqon karto qof kasta 2022, laakiin waa xaqiiqo macquul ah ardayda naafada ah ee raba inay sii wataan waxbarashada dugsiga sare kadib. Waa shay ina geyn kara inaan noqono bulsho si buuxda loo wada dhan yahay oo qof walba faa'iido u leh iyada oo aan loo eegin kala duwanaanshahooda.
Tignoolajiyadu waxay leedahay awood ay ku beddesho nolosheena siyaabo uu qofku qiyaasi karo, laakiin sidoo kale waxay leedahay awood ay ku horumariso nolosha siyaabo aan la qiyaasi karin. Shaqada fog waa hal dariiqo oo tignoolajiyadu ay ku caawin karto ardayda naafada ah, laakiin waxaa jira fursado badan oo mustaqbalka ah.